Amajjii 14, 2020
Awwaanisii waan nyaatu barbaada yaa'u Oromiyaa godina shan keessatti himan
Awwaanisii waan itti iyyaa guddoo sodaata.Qorqoorii fi jrekaanii itti dhaannee qawwee itti tokkofnee ufi bira dabarsine
Homaan Awaannisaa kuni Godina Baaleetiin dabalata Godinoota Harargee Bahaa, Gujii lamaan, Booranaafi Arsii Lixaa keessatti muldhachuu isaa Hawaasni ibsee jira.
Weerarri Awaannisaa kun gama dangaa Somaaleetiin Godina Baalee Aanaa Raayituutti qubachuu isaa Hogganaan Wajjira Qonnaf Qabeenya Umamaa Aanaa Raayitu Obbo Mohammad Ibraahim VOAtti himamii jiru.
Dilli Awaannisa ballessu Godina Baaleetti Xiyyaraan deegaramee yaroo muraasa keessatti akka geggefamu Wajjira Qonnaf Qabeenya Umamaa Godina torbaan dura Kan ibsee ture ta’us akka karoorfametti Kan hin raawatamin ta’uu insa hawaasni.
Rakkon duula karoorfame irra barffachuu dhuguma mudachuu isaa Biroon Qonnaf Qabeenya Umamaa Oromiyaa amanee jira, turus amma duulicha eegalsiisuuf qophiin hundi xummuramuu isaa Biroo Qonnaf Qabeenya Umamaatti Daayreektarri Daayreektoreetii Kunuunsa Biqiltuulee Obbo Dajanee hirpha VOAf humanii jiran.
Obbo Dajaneen akka ibsanitti Weerara Awaannisaa kana qolachuuf bufataaleen xiyyara keemikaala biifanii Baalee Roobee fi Borana Talttalee irratti wiirtuu taasifatanii hojiitti galuuf qohiin xumuramee jira jedhan.
Obbo Dajaneen itti dabaluunis weerarri Awaannisaa kun Godinoota Oromiyaa daangaa Somaalee jiranitti irra deebiin uumamuuf carran akka jiru tilmaamoni Kan agarsiisan ta’uu dubbatanii hawaasni Homaan Awaannisaa naannoo isaanitti akka hin qubanne taasisuu irratti xiyyeffatanii akka qindoomonan ittisan Obbo Dajaneen waamicha fhiheessanii jiru.